စားပွဲထိုးလေးရဲ့ သူငယ်ချင်း (ဒုတိယပိုင်း ) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » My Dear Diary » စားပွဲထိုးလေးရဲ့ သူငယ်ချင်း (ဒုတိယပိုင်း )
စားပွဲထိုးလေးရဲ့ သူငယ်ချင်း (ဒုတိယပိုင်း )
Posted by ကျော်စွာခေါင် on Oct 28, 2013 in My Dear Diary, Short Story | 18 comments
ဆိုတာ အတိအကျမသိပေမယ့် တော်တော်ဝေးဝေး ရောက်လာတာတော့ ပင်ပန်းလာမှုကြောင့်သိသည်….။
နားလိုက်သွားလိုက် ၊စားလိုက်ရေသောက်လိုက်နှင့် လွပ်လပ်မှုကိုလဲ ခံစားရသည်…။
အခုမှ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ဆရာမင်းလူရဲ့ဌက်ကလေး လိုစိတ်ထဲထင်လာသည်…။နောက် ကချင်အဖွဲ့ တွေနဲ့ တွေ့ မလားတွေးမိသေး၊
တွေ့ လဲ ကိစ္စမရှိ လိုက်သွားမှာ…တစ်ကောင်ထဲဘဲ..၊။ ဆရာမင်းသိင်္ခရဲ့ ဖြစ်ချင်တာဖြစ် မောင်ဘချစ် တို့ သခင်သန်းထွန်းပ+ဒု စာအုပ်ကိုဖတ်ထားတာဆိုတော့လဲ ဘာမှကို မကြောက်ချင်တော့။
တစ်ကယ်တန်းတော့ မတွေ့ ခဲ့ ပါ………။
“ မင်းကွာ….ဒီလမ်းကို ဘာထင်လို့ လဲ…မသေကောင်းမပျောက်ကောင်း…တက်..တက်၊ကားပေါ်ကို”
“ကျနော့်မှာ ပိုက်ဆံ ၅ကျပ်တောင်မပြည့်ဘူး…ဦး”
“ မလိုပါဘူးကွာ….လာတက်…ဒါပေမယ့် နောက်မှာဘဲ ထိုင်နော်…သေချာလည်းကိုင်ထားဦး”
သဘောကောင်းသော ကားဆရာကို ဟုတ်ကဲ့ပါ…ဦး ဟုပြောရင်း ကားပေါ်ကို မနည်းတွယ်တက်ရသည်၊ တစ်ကယ်တော့
နောက်မှာအပြည့် တင်လာသော သစ်လုံးကြီးတွေပေါ်မှာ ထိုင်ရသည်…လက်ကတော့ သံကြိုးကြီးတွေကို မြဲမြဲကိုင်ထားရတာပေါ့…။
ကားပေါ်တက်ပြီးတာနဲ့ကားဆရာလည်း တရကြမ်းမောင်းသည်…။
ကားဆောင့်ပေမယ့် လမ်းလျှောက်တာထက်ခရီး ပိုရောက်တာမို့ အဆင်ပြေပါတယ်…။
လမ်းလျှောက်တုန်းက ဘာမှ မဖြစ်ပေမယ့် မြေလမ်းဖုန်လမ်းမှာ မောင်းတာမို့တစ်ကိုယ်လုံးလဲ ဖုန်တွေနဲ့ မျောက်ဖြူတစ်ကောင်လိုဖြစ်နေပြီ..။ကိုယ့်ဘာသာ သဘောကျပြီး ရယ်နေမိသည်…ကားကလည်း ဆောင့်လိုက်သည်မှာ
ဒီလိုနဲ့ ပင် ကားက သစ်လုပ်ငန်းဝင်းကြီးထဲသို့ ဝင်ရောက်လာခဲ့ ပြီ။ ကိုယ်ကလဲ ဆင်းရမှာလား…ဆက်ထိုင်နေရမှာလား မသိ။
ခဏနေမှ ကားဆရာက “ ရပြီ …ကောင်လေး..ငါက ဒီမှာဘဲ လမ်းဆုံးပြီ…မြို့ ထဲတော့ လိုက်မပို့ တော့ဘူး..မင်းဒီလမ်းကြီး အတိုင်းသာဆက်လျှောက်သွားတော့” ဟုပြောလာသည်၊
ကားဆရာကြီးကို ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပြီး ကားပေါ်ကဆင်းကာ တစ်ခါမှ မတွေ့ ဘူးသော လုပ်ငန်းများကို ငေးကြည့်နေမိသည်…။
သူတို့ တွေ ပင်ပန်းလိုက်တာ…လူတွေကလည်း ဆင်တွေနဲ့ အပြိုင် အလုပ်လုပ်နေကြသည်။
မြို့ အ၀င်က စလို့ အိမ်ကလေးတွေ ကြိုကြားတွေ့ ၇သည်…တောရွာလေးတစ်ခုလိုပင်…နောက်မှ မြင်ကွင်းတွေက မြို့ အိမ်တွေလို
စိတ်ကအားငယ်မိသော်လဲ ဘ၀တော့စပြီကွာဟု ကိုယ့်ကိုကိုယ် အားတင်းရင်း မြို့ ထဲ လမ်းလေးခွ ရောက်လာသည်…။
ပြီးမှ ဆိုင်ကထွက်လာပြီး ဟိုကြည့်ဒီကြည့်လုပ်ရင်း ကြော်ငြာဘုတ်သေးသေးတစ်ခုတွေ့ ရသည်…
နီးရာလူကို လမ်းမေးပြီး ပြိုင်ပွဲရှိရာကျောင်းကို ရောက်လာခဲ့ သည်….အသေးစိတ်ပြိုင်ပွဲကြော်ငြာနှင့် စည်းကမ်းချက်ကို ဖတ်လိုက်တော့
လူလည်းစိတ်ဓါတ်ကျသွားသည်….ပေးမည့် ဆုတွေကမနည်းပေမယ့် ၊၀င်ကြေးပေးစရာ ငွေ မပြည့်…။
ပြိုင်ပွဲဝင်မယ့်လူတွေက ကိုယ့်လိုငယ်သူ သိပ်မပါ..လူလတ်တန်းတွေ၊ ပန်းချီစတဲန်းခုံတွေ၊ဘုဒ်ပြားတွေ စုတ်တံတွေနှင့်….။
ကြည့်နေရင်းကပင် ကျောင်းအုပ် ဆရာကြီးဝင်လာပြီး သြ၀ါဒစကား အားပေးစကားပြောကာ ပြိုင်ပွဲကိုစတော့သည်….။
ခဏနေတော့ ဖုန်အလူးလူးနှင့် ကျနော့်ဘေးမှာ ကောင်မလေးတစ်ယောက် ကပ်သီးကပ်သတ်အတူလာရပ်ကြည့်သည်….။
သူလဲ သူများတွေ ဆွဲနေတာကို လာငေးတာဘဲဖြစ်သည်…..။ခဏနေတော့ သူ့ ဘာသာငြီးသလို ကိုယ့်ကိုပြောသလိုနှင့်….
“ ဆွဲချင်လိုက်တာ…” ဟုပြောသည်…ကိုယ်ကလဲ အားပေးတဲ့ အနေနဲ့ …
“ အင်…ဆွဲတတ်ရင် သွားဆွဲလေ”
သူမက မယုံသလိုကြည့်ပြီး….“၅ကျပ်တောင် မရှိဘူးလားဟာ..”
“ ငါအိမ်ကထွက်လာတာ…( …….)မြို့ က”
“တစ်ကယ်” “ဒါဆို …ခဏလာဦးဟာ” ဟုပြောပြီး လက်မောင်းကိုဆွဲခေါ်သွားကာ ကြော်ငြာဘုဒ်ကို သေချာပြန်ဖတ်နေသည်…။
နောက်မှသူမက တိုးတိုးလေး ကပ်ပြောသည်….။
ကျနော်သူမရဲ့ ပွင့်လင်းမှု ကိုတော်တော်သဘောကျသည်….သူမက ဈေးတွက်တွက်နေတာကိုး။
ကျနော်သူမကိုသဘောကျပြီး ရယ်နေတော့…..ဘာလဲ နင်ကမဆွဲဘူလား…..
ပန်းချီခန်းစောင့်နေသော ဆရာမကို သွားပြောတော့ အချိန်နောက်ကျနေပြီဟုပြောသည်….။
ရပါတယ်ဟု ပြောတော့ လက်ခံပြီး ၃ပေ ၂ပေခွဲလောက်စက္ကူအထူတစ်ချပ်နှင့် စုတ်တံသေးသေးလေး၃ချောင်း၊ ပြီးတော့ စက္ကူပေါ်မှာ ဆေးရောင်လေးရောင်ပုံပေးသည်…။
ခင်မက သူများတွေလို ဆေးများများဘူးတွေနှင့်စုတ်များများပေးဘို့ ပြောတော့ ဒါဘဲရမယ်ဟုဆရာမကပြောသည်…။
သူများတွေလို စတဲန်းခုံနဲ့ အောက်ခံဘုတ်ပြားတောင်းတော့ မရှိဘူး….ဆွဲ၇င်ကြမ်းပြင်မှာဆွဲလဲရတာဘဲ…တဲ့ ။
သြော်…လောကကြီးကဘာလို့ များမညီမမျှတွေ လုပ်နေဖြစ်နေကြတာလဲ..
“ သူတို့ ကိုနိုင်အောင်ဆွဲသိလား…သူတို့ တပည့်တွေမို့ ဘက်လိုက်နေတာ…ငါသိတယ်…”
ပြောပြောဆိုဆို အလင်းရောင်ရသော တံခါးပေါက်ဘေးမှာ နေရာချလိုက်သည်…ပြိုင်ပွဲဝင်နေသူတွေက ဖုန်အလူလူးနှင့် ကြမ်းပြင်မှာထိုင်ဆွဲဘို့ လုပ်နေသောကျနော့်ကို လှောင်ပြုံးတွေနဲ့ ကြည့်နေကြသည်….တစ်ချို့ က မကြားတကြားရယ်နေသည်…။
ကိုယ့်နယ်မှာကြက်ဖ၊သူများနယ်မှာကြက်မ ဆိုတော့လဲ ဒီလောက်တော့ရှိမှာပေါ့….။
ဆွဲမလိုလုပ်ပြီးမှ သူတို့ ဆွဲတာကို လိုက်ကြည့်လိုက်သည်…။
ဒီလောက်ကြာတာတောင်တစ်ချို့ က အောက်လိုင်းကောက်လို့ မပြီးသေး။ တစ်ချို့ က အရောင်စသွင်းနေပြီ…။
အားလုံးကို လိုက်ကြည့်ပြီးသောအခါ စိတ်ကသိလိုက်ပြီ…..။
ဒါနဲ့ နေရာပြန်ယူ…..လုပ်ငန်းပုံတွေပြန်စဉ်းစား။ ပြီးတော့ ကားဆရာကြီးကို စိတ်ထဲက အထပ်ထပ်ကျေးဇူးစကားပြောမိသည်။
ရေလုပ်ငန်း၊လယ်လုပ်ငန်းတေါက မခက်ပေမယ့်…သစ်လုပ်ငန်းကို လိမ်လို့ မရ…ဆင်၊ သစ်တင်ဝန်ချီကား…ဒါတွေကအရေးကြီးသည်…နာရီပိုင်းလေးလောက်ကမှ သစ်တောဝိုင်းထဲမှာ ထိုင်ကြည့်နေခဲ့ သောကိုယ့်မျက်လုံးထဲမှာ အားလုံးအလွတ်ရနေသည်…။
လုပ်ငန်းတွေကို ရောစပ်ပြီး အောက်လိုင်းကောက်သည်…။
တံခါးပေါက်အပြင်မှ လာကြည့်နေကြသော ကျောင်းသားကျောင်းသူတစ်ချို့ က ဖုန်တွေသဲတွေနှင့် ကျနော့်ကို လာရီနေသေးသည်…။
နောက်အရောင်တွေစသွင်းပြီးစိတ်ကိုနှစ်ဆွဲနေတုန်းမှာ တံခါးပေါက်တွင် လူတစ်ယောက်လာရပ်ကြည့်တော့…ကျောင်းသူတွေ လစ်ကုန်ကြသည်….။ ထိုလူက ပါးသိုင်းမွှေး မုတ်ဆိတ်မွှေးဗရပွနှင့်…ဆံပင်တွေကကောက်ဖွာပြီး အရှည်ကြီး။
ပါးစပ်ကို လက်နှင်ကွယ်ထားပြီး ပြောနေတာ ထိုသူပင်။ သူပြောတာမှန်ပါသည်…ကိုယ်လည်းလျှော့ချသည်..သူ့ ကို ကျေးဇူးတင်စွာပြုံး
ခဏနေပြီး…တချို့ နေရာလေးတွေရောက်လျှင် အဲဒါလေး ၀ပ်ရှ် လုပ်( ရေမျှော) လိုက်…။ တုန်းမြှင့်လိုက်။ စသဖြင့်လိုအပ်တာလေးကိုတိုး
သူထောက်ပြတာလေးတွေက ပန်းချီကားကို ပိုပြီး အသက်ဝင် သဘာဝကျစေတာ အမှန်ပင်..နောက် “ ရနေပြီ…လက်စသပ်တော့”
သူထွက်သွားမှ ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေ ပြတင်းပေါက်ကနေမရော အထဲထိဝင်လာပြီး ၀ိုင်းအုံကြည့်ကြသည်….။
အလင်းရောင်ပင် မရချင်တော့။ နောက်သူတို့ စာအုပ်ထဲမှာ အော်တိုရေးခိုင်းကြသည်….ကျနော်အံ့သြပါတယ်.။
ပန်းချီမပြီးသေးလို့ နောက်မှလို့ ပြောလဲမရပါ။ အတင်းပင်…။
ကျနော် တစ်ယောက်ကျောင်းသူတွေ တအုံးအုံးနဲ့ ဆိုတော့ အခန်းစောင့်ဆရာမက စိတ်တိုနေပုံရသည်…။
ကျောင်းသူလေးတွေကလည်းဆူညံနေသည်.။ ကိုယ်ကလဲ ဆွဲနေသူတွေကို အားနာတယ်….ပန်းချီဆိုတာ အေးအေးဆေးဆေးဆွဲမှ
ဧည့်သည်တစ်ယောက်ပါ ဒီမြို့ ကို ရောက်လာရင်းပန်းချီပြိုင်ပွဲတွေ့ လို့ ဝင်ပြိုင်တာပါလို့ ပြောတော့ ဘာမှ မပြောဘဲ သူ့ တပည့်တွေရဲ့ ပုံကို လိုက်ကြည့်နေသည်.။ ပြီးမှ တစ်ခေါက်လာပြီး ……
“ ဟ…ကသာရောက်နေမှတော့ ကသာမှာနေတာကို ပြောတာပေါ့ကွာ”
“ ကျနော် ဘယ်မှာနေရမလဲဆိုတာ ကျနော်လဲမသိပါဘူး…ကျနော်အလုပ်တစ်ခု ရှာ၇မှာပါ”
ကိုယ်က ပြန်သာ ဖြေနေရတာ စိတ်ထဲမှာတော့ နဲနဲလန့် နေသည်….။
“ မင်းဘာသာ ဘယ်မှာဘဲနေနေကွာ…နောက်၃ရက်ကြာရင်ဆုပေးပွဲရှိတယ်…မင်းဘဲ ပထမဆုကိုလာယူ ကြားလား”
ဆရာကြီး ဘာများပြောမလဲအထင်ဖြင့် နားစွင့်နေသူအားလုံး တစ်ချက်တော့ကြောင်ပြီးတိတ်ဆိတ်သွားတာ….
နောက်မှ ဆရာကြီးက ကျနော့်ပုခုံးကိုကိုင်ကာ……“ မင်းတော်တယ်ကွ” ဟုပြောပြီးထွက်သွားတော့သည်…။
စိတ်မှာ အရမ်းဝမ်းသာသွားသည်…။ဒါပေမယ့် ဒါပြိုင်ပွဲစည်းကမ်းအရ မဖြစ်သင့်ပါ၊ ဆရာကြီးကဆုကိုတစ်ကယ်ပေးချင်ပါစေဦး ကျန်သောရေးဆွဲသူတွေကိုငဲ့ရပါမည်။ အားနာစိတ်ဖြင့် ပြိုင်ပွဲဝင်တွေကို ကျနော် မကြည့်ရဲပါ……။
ဆရာကြီးကို လန့် သည့် အရှိန်နဲ့ ဘေးမှာ ကွယ်ရပ်နေသော ခင်မ ကပြေးလာပြီး လက်မောင်းကို အားရပါးရရိုက်ကာ…
“ နင် တစ်ကယ် ပထမဆု ချိတ်သွားပြီ…တို့ ဆရာကြီးတစ်ကယ်ပြောတာဟ…ဆရာကြီးကအဲလိုကြီး”
သူမပြောတဲ့ ဆရာကြီးကအဲလိုကြီးဆိုတာ …နားမလည်ပေမယ့် ပြိုင်ပွဲခန်းထဲက၂ယောက်အတူ ထွက်လာခဲ့သည်…
ကျောင်းသူလေးတွေ ရောက်လာပြီး အတင်းအော်တိုရေးခိုင်းသည်…ခင်မင်ဘို့ လဲ ကောင်းပါသည်…။
နောက်သူတို့ စကားသံဝဲ၀ဲလေးတွေကို ချစ်သည်….အထက်ပိုင်းကလူတွေ စကားဝဲကြပေမယ့် ကသာစကားဝဲပုံက တစ်မျိုးထူးခြားသည်။
သူငယ်ချင်းခင်မကတော်တော်ခင်ဘို့ ကောင်းပါသည်။သူ့ ပုံစံက ဆံပင်ဂုတ်ဝဲလေးနှင့် ၊သွားလေးက ခေါယောင်ယောင်…ဒါပေမယ့်သိပ်မသိသာပါ..အဲ မျက်လုံက မို့ ပြီး နဲနဲပြူးတယ်…( စိတ်မဆိုးနဲ့ ခင်မရေ…ဒါမှနင့်ကိုပုံဖမ်းမိကြမှာ)။ ဒါတွေက အရေးမကြီး
သူ့ စိတ်ဓါတ်လှသည်….ကျနော်လိုချင်တာ စိတ်အလှ။နောက်ခင်မက ၉တန်းကျောင်းသူ။ ကျနော်က ၈တန်းကျောင်းသား…
ရွယ်တူလြဲဖစ်နေတော့ စကားပြောရတာ ပိုအဆင်ပြေသည်…ခဏလေးအတွင်းမှာ အရမ်းခင်သွားကြသည်..။
နောက်သတိရပြီး….“ခငမ ဟို အကိုကြီးရော ဘယ်မှာလဲဟ”
“ ငါပုံဆွဲနေတုန်း ပြတင်းပေါက်ကနေ ပြောပေးနေတာလေ…နင်မကြားဘူးလား”
“ ဟင့်အမ်း…ငါမကြားပါဘူး…ဘာပြောလို့ လဲ”
“ ငါလိုအပ်တာလေးတွေကို သူကပြောပေးတယ်ဟ…သူ့ ကို ကျေးဇူးစကားပြောရမယ်”
“ ဟာ…အဲဒီလူကြီးက ရူးနေတာဟ…နောက်သူပန်းချီမဆွဲတတ်ပါဘူး”
“ ဟမ်..ရူးနေတာ…မဖြစ်နိုင်ပါဘူး ။သူဆွဲတတ်တယ်…သူပြောတာ အမှန်တွေပါ..ငါဘဲသိတယ်…”
“ ညီညီ..ငါက ကသာသူနော်..ဒီမြို့ မှာ မွေး၊ ဒီမြို့ မှာနေတာ…နင်က ဒီနေ့ မှ ကသာရောက်တာ၊ နင်ကဘာမှ မသိပါဘူး၊ အဲဒီလူကြီးက
ကျနော်အံ့သြမိသည်..စိတ်ထဲမှာ အရူးဆိုတာ ဘယ်လိုမှ လက်ခံလို့ မရ…ဒါပေမယ့် နောက်မှ စုံစမ်းတော့မယ်လေ…တွေ့ ကြဦးမှာပါဟု
“ အေး….မွေးကတည်းက တစ်ခါမှတော့ မလုပ်ဘူးသေးပါဘူး….ဒါပေမယ့် လုပ်ရမှာပေါ့ဟာ”
“ ဖြစ်နိုင်ရင်တော့ ငါလက်ဘက်ရည်ဆိုင်မှာ စားပွဲထိုးတွေ ဘာတွေ လုပ်ချင်တယ်၊ ခင်မ …ငါတနေ့ ကို လက်ဘက်ရည် ၆ခွက်လောက်သောက်မှ နေလို့ ရတာ…”
“ အေး…ဒါဆို အတော်ဘဲ ငါ့အသိတစ်ယောက်လက်ဘက်ရည်ဆိုင်ရှိတယ်ဟ…တို့ သွားရအောင်”
နှစ်ယောက်သား စက်ဘီးလေးတွန်းကာလမ်းလျှောက်ရင်း သူပြောတဲ့ ဆိုင်ကိုရောက်လာသည်…ဆိုင်ကတရုပ်ဆိုင်။ အဘိုးကြီးတစ်ယောက်ထိုင်နေတာကို ခင်မကနုတ်ဆက်ပြီး “ အိတေ” ရှိလားဟုမေးသည်…။အဘိုးကြီးခေါ်လိုက်ပြီး ခဏနေတော့
ခင်မက အလုပ်လိုက်ရှာနေကြောင်း ပြောပြီး ကျနော့်ကို မိတ်ဆက်ပေးတော့…..
“ ဟယ်…စားပွဲထိုးလုပ်မယ်..တစ်ကယ် ၊ ချောလိုက်တာဟယ်..ခင်မ ငါသူ့ ကို ခေါ်ထားလိုက်မယ်…တစ်သက်လုံးနေလဲရတယ်”
သွားပြီ၊ ကိုအိတေက မိန်းကလေးစိတ်ဝင်နေတာ….
ကိုအိတေ မတွေ့ အောင် စားပွဲအောက်ကနေခင်မကို ဆွဲဆိတ်တော့လဲ….မုန့် တွေကို အသေအလဲတွယ်နေရင်းက….
မျက်လုံးပြူးကြီးဖြင့် ဘာလဲဟူသော အဓိပ္ပါယ်နှင့်ပြန်ကြည့်နေသည်…
ဟိုက ပြုံးလျှက် …..“ ၁၅၀၀”
“ ဟာ…တစ်ကယ်။။ညီညီ နင်တော့ပွပြီ၊ အများကြီးဘဲ”
ကျနော်တော်တော် စိတ်တိုသွားပြီး ခင်မခြေထောက်ကို ဆောင့်နင်းလိုက်ပြီး….မျက်စောင်းထိုးကြည့်သည်။။။အမယ် မယ်မင်းကြီးမက
ကိုယ့်ကိုတောင် ခေါင်းလေးငြိမ့်ပြီး ပြုံးပြနေသေးသည်…။မျက်လုံးပြူးကြီးနှင့်။
“ဒီမှာတော့ မဖြစ်နိုင်ဘူး ထင်တယ်…”
“ ဟယ်……ဘာဖြစ်လို့ လဲ”
ပြောနေတုန်း လက်ဘက်ရည် သောက်သူလာသဖြင့် ကိုအိတေ ထွက်သွားမှ…
“ ခင်မ …ငါဒီမှာ မလုပ်ချင်ဘူး…သူက မိန်းကလေးစိတ်ပေါက်နေတာ…ငါ့ကို တစ်ခြားသွားပို့ ပါဟာ”
နောက်မှ အတွေးတစ်ခုရပြီး…တခြားမွတ်ဆလင်ဆိုင်တစ်ခု ငါတွေ့ ခဲ့ တယ်….နေ့ ခင်းကတောင် ..ငါသောက်ခဲ့ သေးတယ်…”
“ အော်…အေး..စတားလိုက်…နေဦး အိတေကို ငါပြောကြည့်မယ်”
ခဏနေ ကိုအိတေ ပြန်ရောက်လာတော့ ခင်မက တစ်ခြား အကြောင်းပြပြီး….ဒီမှာ ခက်ခဲနိုင်ကြောင်း ပြောပြသည်….။
နောက်ဆုံးတော့ ကိုအိတေ ကိုယ်တိုင် လိုက်ပြောပေးပါသည်…။
ကိုအိတေက ဘာမှလဲ မသိဘဲ အရမ်းကို ကျနော့်ဘက်က အာမခံနေသည်….။
ဆိုင်ရှင် အဘိုးကြီးအိပ်နေသည်…စားပွဲထိုးကလဲ ရှိပြီးနေသည်ဟုပြောသည်…ကျနော်လဲ ဘာမှ မတတ်နိုင်တော့ပါ။
အကျိုးအကြောင်းကို ခင်မနှင့် ကိုအိတေက ပြောပြတော့ ဆိုင်ရှင် အမား( အမေ….နာမည်မေ့ နေသည်)က…
“ ဒီမှာ စအလုပ်လုပ်သူတိုင်းကို ၇၀ ကျပ်ပေးတယ်…ထမင်းညမနက်ကျွေးတယ်၊ အိပ်စရာနေရာပေးတယ်၊ ဒါပေမယ့် မင်းကို
ငါစအလုပ်လုပ်တာနဲ့ တစ်လ ၁၀၀ ပေးမယ်…ငါ့ကိုတော့ မင်းနာမည် မခေါ်ရဘူး အမား( အမေ) လို့ ခေါ်၇မယ်”
ဟီ ဟိ ကိုညီကွ…
ရုပ်အခံရှိတော့လည်း… လုပ်ကြံရတာ လွယ်ပါ့…
မောင်ကျောက်ဘဝကတော့ မရှိခိုးနိုး… မလှစုန်းယိုး…
ရေးသာရေး ဆက်ဖတ်နေမယ် အကိုကြီးရေ…
ကသာကမ်းနားလမ်းက ဆိုင်တန်းတွေမှာ ညနေပိုင်းထိုင်တဲ့
ဦးခေါင်တို့များ မျက်နှာပွင့်ချက် ငယ်ငယ်ရုပ်ကလေးကလည်း တကယ့်ကိုချစ်စရာလေး.. မိန်းမလည်းကြိုက်..ယောက်ျားလည်းကြိုက်တဲ့ရုပ်လေးဖြစ်အောင်မွေးပေးတဲ့မာမီရဲ့ကျေးဇူးကမနည်းဘူး :)) စိတ်ဝင်စားစရာလည်းကောင်း.. အခုအချိန်မှာ အဲဒါတွေကကျော်လွန်ခဲ့ပြီးမှန်းသိပေမယ့် စိတ်မကောင်းဖြစ်ရသေးတယ်.. :))
​ကောင်းခန်းမှာဖြတ်​ထားလိုက်​ပြီ… ​သေ​ရော ..
အဲဒီ​ခေတ်​အခါက အိမ်​​ပြေးကြတာဟာ ကိုယ့်​အယးကိုယ်​ကိုးပြီး သူရဲ​ကောင်းဝါဒက်ို စွဲကိုင်​ထားကြတာ ။
အိမ်​က​ပြေးရင်​ မိဘပစ္စည်းရှိသမျှ သုတ်​ ပြီးအ​ပျော်​ခရီးထွက်​ကြတာဆို​တော့ …
ဒီလို စပ်​ဖျင်းဖျင်း အရသာ​ဘေး​တွေသ်​ကြမှာမဟုတ်​ဘူး
ကဲ…. ​စောင့်​​နေမယ်​ဗျို့ …
စောင့်မျှော်နေသူငါ..စိတ်ကူးယဉ်နေသူပါ… အဲ.. ပို့စ်ကိုမျှော်တာပြောတာ
ကိုအိတေ လက်ကတော့ လွတ်ပြီ
ကြည့်ရတာ အဆင်ပြေမယ့်ပုံ ရှိနေတယ်ဗျ
ဘယ်လိုဘယ်လို ဆက် ဖြစ်ဦးမယ်
ဘယ်လိုမျိုး အဖြစ်အပျက်တွေနဲ့ ဖမ်းစားဦးမယ် ဆိုတာကိုတော့
ရှေ့ အပိုင်းတွေမှာ မျှော်တာပေါ့ဗျာ
နောက်တစ်ပိုင်း စောင့်မျှော် အားပေးနေပါတယ်။
…..၁၀ တန်းအောင်ကာစ က အိမ်ကထွက်ပြေး ဖို့ကြိုးစားတာ ပြန်သတိရမိတယ်
မျက်နှာမြင် ချစ်ခင်ပါစေ ဆိုတဲ့ ပြည့်နေတာနေမှာနော်
ဒီလောက် မျောပါသွားအောင် ရေးပြထားတော့
ကိုယ့်အကြောင်း ကိုယ်ရေး ချင်လာတယ်။
သေချာတာတော့ ဦးခေါင် ရေးသလိုမျိုး
ဖတ်သူကို ဆွဲဆောင်မှုရှိရှိ ခေါ်လာနိုင်မယ်မထင်
ိမင်းသားလောင်းလျာလေးဆိုတော့လဲ မျက်နှာမြင်ချစ်ခင်ပါစေဆုနဲ့ပြည့်သပေါ့လေ။ ဆက်လက်စောင့်မျှော်လျှက်
တစ်ခါက မဂ္ဂဇင်းဝတ္ထုတိုတစ်ပုဒ်ထဲက (ဘယ်စာရေးဆရာမှန်း မမှတ်မိတော့ဘူး) လူဆိုတာ ဘ၀မှာ ထမင်းစားလက်မှတ်တစ်ခု ရအောင်လုပ်သင့်တယ်ဆိုတာလေး သွားသတိရမိတယ်။
အိမ်ပြေး ဆြာခေါင်က ဘ၀အတွက် ထမင်းစားလက်မှတ်ရထားတာကိုး။
အသိမရှိဆွေမျိုးမရှိပဲ ကသာကို ဘာ့ကြောင့်သွားတာလဲ သိချင်သား။
ဒါ့ပုံထဲက ကလေး လေးကဆြာခေါင်ရဲ့ စုဘူး နဲ့ကောင်ကလေးလား။
အပေါင်းအသင်း မိတ်ဆွေကောင်းနဲ့ တွေ့တာပဲ။ ဆြာခေါင့်ဆီက ပညာအမွေတောင်းမှပဲ။ နွားပလာတာကြွေးသလို မဖြစ်ရအောင် instruments စုတ်တံတွေရယ် ကင်းဘတ်စတွေရယ် အကြောင်းရေးပါလားဟင်။ ပုံတူတော့ဆွဲချင်ဘူး မတူမှာကို သိနေလို့။ ဟိ။
လူဂလေး … လူဂလေး ….
ဖိုးဖိုးဂျီး ကို မမှတ်မိလေရော့ဒလားကွယ် …
အထက်အမိန့်ဒေါ်အရ လူဂလေးဆီကို ရောက်လာဂဲ့ရဒါဗျဲကွယ့် ..
ကိုယ့်ကိစ္စပီးဒါနဲ့ ဖိုးဖိုးဂျီး က ကောင်းဂင်ပေါ် ပျံတက်တွားရဒဂိုးး
ဒါဂျောင့် .. လူဂလေး ရှာဘေမယ့် မတွေ့ဒေါ့ဒါဘာ …